Windows 10 Professional Get Lifetime License keys only $50 USD
ငွေကျပ်၅သောင်းထဲနဲ့ Windows 10 Pro တစ်သက်တာလိုင်စင် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီနော်….
On Sale! Only $50 – Cheap Activation Key For Windows 10 PRO
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ တရားဝင် Windows License သုံးတဲ့သူတွေရှားပါတယ်… ဘာလို့ အဲ့လောက် တရားဝင်လိုင်စင်ကို ၀ယ်ယူအသုံးပြုတဲ့သူ ရှားနေရတာလဲ? Microsoft Windows Products တွေက အရမ်းကို ဈေးကြီးလွန်းတာမို့… ကျွန်တော်တို့ သာမာန် ကွန်ပျူတာ Users တွေ ၀ယ်ပြီး အသုံးမပြုနိုင်ကြပါဘူး။
Computer အခွေတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ၁ခွေ ၁ထောင်နဲ့ ၀ယ်ယူပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Windows Installation လုပ်ပြီး၊ တရားမ၀င်တဲ့ Online က အလွယ်တကူ ရှာလို့ရတဲ့ Activators တွေ ကို သုံးပြီး ဖြစ်သလိုပဲ… ယနေ့အထိ Cracked သုံးနေကြပါတယ်… ယခု ရေးနေတဲ့ စာရေုးသူကိုယ်တိုင်ရောပေါ့… 🙂 စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း တကယ့် လိုင်စင် ၀ယ်သုံးရင် ဘာတွေ ကောင်းလာမှာလဲ ဆိုတာကို မသိပါဘူး။ ထဲထဲ ၀င်ဝင် မရှင်းပြတတ်တာ စာရေးသူ ညံ့လို့ပါ။ Microsoft ရဲ့ Official Lunch မှာ အသေးစိတ် သွားရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
တရားဝင်လိုင်စင်သုံးရင်… ဒါတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
Pirate Windows တွေက Update လုပ်လို့မရဘူး။
Crack Windows တင်ထားပြီဆိုရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေ Auto Update ဖြစ်သွားတာနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ Crack လုပ်ရတာ၊ လုပ်လို့မရရင် အမဲကြီးဖြစ်၊ လေးလံလာပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ Windows အသစ်ပြန်တင်ရတာနဲ့တင် တော်တော်လေးကို ရှူပ်လှပါတယ်။ (ဒီပြဿနာတွေ ထပ်မဖြစ်တော့ဘူး)
မည်သည့်ဘာသာစကား၊ နိုင်ငံမရွေး ကို Installation ပြုလုပ်နိုင်ကာ၊ 32Bit နဲ့ 64Bit နှစ်မျိုးလုံးအတွက် လိုင်စင်ကီး တစ်ခုတည်း စတင် အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင်ကတော့ တစ်သက်တာ လိုင်စင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Windows 10 License Key နဲ့ Windows 10 ဖိုင် Downlaod Link ကို ၀ယ်ယူရဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ Email အကောင့်သို့ ငွေလွှဲရောက်ပြီးလို့ မှန်ပြီလိ်ု့ စစ်ဆေးပြီးမှ ၅-နာရီမှ ၆ နာရီအတောတွင်း သင့်ရဲ့ Email သို့ Invoice နှင့်တကွ ပေးပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Brand New : ယခု ရောင်းချပေးတဲ့တရားဝင်လိုင်စင် Keys တွေက တစ်ခါမှ မသုံးရသးတဲ့ Windows 10 PRO ၁၀၀% တရားဝင် လိုင်စင်ဗားရှင်းပါ။ ၀ယ်ယူလိ်ုက်တဲ့ လိုင်စင်ဟာ… မည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို၊ ကြိုက်တဲ့နေရာကိ်ု သယ်သွားလို့ရပါတယ်။ တကယ်အစစ်မဟုတ်တဲ့ Pirate ဆိုရင်တော့ အဲ့လို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကို သယ်ဆောင်သွားခွင့်မရှိပါဘူး။ တစ်ခါ လိုင်စင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ System Motherboard သက်တမ်းမကုန်ဆုံးသေးသရွေ့ ယခု တရားဝင်လိုင်စင်ဗားရှင်းကို အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ ယခု Windows 10 PRO Product လိုင်စင်ကို ၀ယ်သင့်တာလဲ?
ယခု Windows 10 PRO လိုင်စင်ကို အသုံးပြုလို့ ရတာတွေကတော့ –
ကွန်ပျုတာ၁လုံးတည်းအတွက် လိ်ုင်စင်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
မည်သည့် Desktop နှင့် Laptop PC ကို မဆို Installation ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယခု လိုင်စင်ကီးသည် Original Recovery Media and CoA sticker ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
Windows 10 PRO Product key ၀ယ်ယူပြီး၊ ငွေလွှဲရောက်တာနဲ့ သင့် Email ကို ၀ယ်ယူထားကြောင်း Mail တစ်စောင်ပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Website မှ Paypal အကောင့်ဖြင့်လည်း ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ ပြည်တွင်း ဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့၊ AYA, KBZ, CB Bank အဆင်ပြေရာ ဘဏ်ကနေ ငွေလွှဲပေးပို့ကာ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး၊ Mobile Banking ရှိသူများလည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Windows ကို Product Key ကို ကျွန်တော်တို့ ဆီကနေ ဝယ်ထားပေမယ့် ကိုယ်တိုင် မတင်တတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်မှူပေးပါတယ်။
ငွေလွှဲရမယ့် အကောင့်နံပါတ်များကတော့ –
KBZ ACC : 99930799936557001
KBZ ACC NAME : CHAN MYAE MAUNG
AYA ACC : 0075201010024471
AYA ACC NAME : CHAN MYAE MAUNG
CB ACC : 0021600500031078
CB ACC NAME : CHAN MYAE MAUNG
ငွေလွှဲပြီးတာနဲ့ ယခု (+95) 9795883549 Viber No. ကို ငွေပို့ထားကြောင်း၊ Screenshot နှင့်တကွ၊ အမြန်ဆုံးပေးပို့ထားပါ။ ပြီးတာနဲ့ သင့်ရဲ့ Email ကို ကျွန်တော်တို့ လိုင်စင်ကီး ၂၅ လုံးကို ဘောင်ချာနှင့်တကွ အများဆုံး ၂-၃ နာရီကြားအတွင်းမှာ ပေးပို့သွားမှာပါ။
IF YOU HAVE SOME PROBLEM YOU CAN CONTACT US : [email protected]